सबै पोष्ट डिलिट : दीपिका पादुकोण | eKhabarSanjal
Home मनोरञ्जन सबै पोष्ट डिलिट : दीपिका पादुकोण
अहिले थुप्रै कलाकारहरूको सामाजिक सञ्जाल ह्याक भइरहेको हुँदा उनको इन्स्टाग्राम र ट्विटर पनि ह्याक भएको हो कि भन्ने अनुमान लगाइएको छ।
बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले आफ्नो इन्स्टाग्राम र ट्विटरबाट सबै पोष्ट हटाएकी छिन्। उनले सन् २०२० को अन्तिम दिन डिसेम्बर ३१ मा सबै पोष्ट हटाएको भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ।
दीपिका सामाजिक सञ्जालमा राम्रो फ्यान तथा फलोअर्स भएकी कलाकारमध्ये पर्छिन्।
दीपिकाले यसो गर्दा उनका फलोअर्सहरू चकित परेका छन्। अहिले थुप्रै कलाकारहरूको सामाजिक सञ्जाल ह्याक भइरहेको हुँदा उनको इन्स्टाग्राम र ट्विटर पनि ह्याक भएको हो कि भन्ने अनुमान लगाइएको छ। यद्यपि हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार दीपिका आफैंले पोष्टहरू हटाएको बुझ्न सकिन्छ। उनले पोष्टहरू हटाएलगत्तै इन्स्टाग्राम र ट्विटरको डिपी एउटै राखेकी छन्।
केही समयका लागि सामाजिक सञ्जालबाट टाढिन दीपिकाले पोष्टहरू हटाएको हुन सक्ने पनि अनुमान लगाइएको छ। तर यस विषयमा उनले केही बोलेकी भने छैनन्। पोष्टहरू हटाइए पनि इन्स्टाग्राममा उनको हाइलाइट स्टोरीहरू अझै हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै ट्विटरमा उनले लाइक गरेका ट्विटहरू अझै देखिन्छन्।
दीपिकाको इन्स्टाग्राममा ५२.५ मिलियन फलोअर्स र ट्विटरमा २७.७ मिलियन फलोअर्स छन्।
अहिले दीपिका उनका श्रीमान रणवीर सिंहसँग बिदा मनाउन राजस्थान पुगेकी छन्। रणवीर र दीपिका फिल्म ‘८३’ रिलिजको पर्खाइमा छन्। यो उनीहरूको सहकार्य रहेको चौथो फिल्म हो।
कबिर खानद्वारा निर्देशित फिल्म ‘८३’ ले सन् १९८३ मा भारतीय क्रिकेट टिमको अप्रत्याशित जीतको वर्णन गर्छ। यसमा रणवीर पूर्व कप्तान कपिल देवको भूमिकामा देखा पर्नेछन् भने दीपिका उनकी श्रीमती रोमी भाटियाको पात्रमा छिन्। फिल्ममा बोमन ईरानी, पंकज त्रिपाठी, साकिब सलीम, एम्मी विर्क, हार्डी संधु लगायत कलाकारहरूले पनि अभिनय छ।
त्यस्तै दीपिका शकुन बत्राको फिल्ममा अनन्या पाण्डे र सिद्धान्त चतुर्वेदीसँग देखा पर्नेछिन्। उनी शाहरुख खानसँग फिल्म ‘पठान’मा समेत देखिने चर्चा छ।
Previous articleवैशाखमा चुनाव हुन्छ, जितेर प्रधानमन्त्री हुने आँट छ: शंकर पोखरल
Next articleअभिनेता सलमान खानले सहयोग गरे : रेमो डिसुजा
आर्यन खानलाई छुटाउन साहरुखसँग २५ करोड मागिएको थियो ??
नागा र सामन्था डिभोर्सको चर्चा ??